AASraw ntụ ntụ ngwaahịa ngwaahịa ngwaahịa | AASraw
AASraw àgwà mmepụta
AASraw na-enyekarị ihe ndị dị mkpa maka steeti mmiri anabolic, ọgwụ ndị na-efu ọnwụ, ịṅụ ọgwụ ọjọọ, SARMS, ọgwụ PCT (ọgwụ okirikiri) ọgwụ, hormones na ụmụ ọgwụ ndị ọzọ. Ihe ndị a gụnyere ngwá ahịa kachasị ewu ewu na ahịa, dị ka Anavar, Winstrol, Anadrol, dianabol, usoro Testosterone, usoro Trenbolone, usoro Boldenone, usoro Nandrolone, usoro Methenolone, Drostanolone Series, Estradiol Series, Cialis, Viagra, Vardenafil, Anavafil, Flibanserin , Sibutramine, Orlistat, Clomid, Halotestin, Femara, Trestolone Acetate, Ibutamoren, Testolone, Ligandrol, Cardarine, Ostarine, Clenbuterol, Modafinil, Pregabalin, Dymethazine, Yohimbine, wdg
Maka àgwà nke AASraw, anyị nwere ike ịkọwa ihe anyị nwere ike ịchọta. Maka ndị ọkachamara na steroid na-esi nri ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ na-edozi ahụ, site na ọdịdị na isi ísì na ihe odide ndị ọzọ, ha nwere ike ịkọ na ngwaahịa ahụ bụ ndị amamihe maọbụ ndị ọjọọ. Ma iji nyere ụfọdụ aka ọhụrụ aka, niile ihe onwunwe sitere na AASraw na-eme ka ọ dị ọcha maka ịdị ọcha karịa 98%, ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị ahụ dị ọcha 99%. E nwere nyocha HPLC nyocha na COA dị ka nkwado bụ isi maka nkwa anyị. Na, anyị na-agba ndị ahịa anyị zụrụ azụ ka ha nwalee uzuzu site na Laboratories obodo ha ma anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ ndị yiri ya.
N'ikpeazụ, AASraw nyere ndị ọrụ steroid ndụmọdụ ka ha nọgide na-adị ndụ site n'ịdị ọcha nke steroid. Ikwenye ma ọ bụ ịṅụbiga mmanya ókè adịghị mma. Iji nweta ndị ziri ezi, iji zere ihe ize ndụ na-enweghị isi.
Otilia on Akwukwo (Oblean) uzuzu
Alissa on Trenbolone Acetate (Tren ace) ntụ ntụ
Tabitha on Oxandrolone (Anavar) ntụ ntụ
Earle on Akwukwo (Oblean) uzuzu
Arlie on Tadalafil (Cialis) ntụ ntụ
The Top 10 testosterone ester: nke dị mma maka gị?
Lorenza on Testosterone ntụ ntụ
Margery on Akwukwo (Oblean) uzuzu
Patricia on Testosterone ntụ ntụ
Oxandrolone (Anavar) ntụ ntụ
gosiri 3.33 si 5